Vaovao - Tombony ho an'ny fitaovana tsy tenona?
Tombony azo amin'ny fitaovana tsy tenona?
Vokatra maro no mampiasa lamba tsy tenona, toy ny diapers ampiasain'ny ankizy, ary vokatra vita amin'ny lamba toy ny sarontava. Betsaka ny tombony azo avy amin'ny lamba tsy tenona. Izy io dia manana permeability rivotra madio sy fiasan'ny rano tsara. Noho izany, ny lamba tsy tenona dia ampiasaina amin'ny saha midadasika. Na izany aza, noho ny fahalalana voafetra an'ny editor, dia kely dia kely ny fahalalana fantatsika. Ny fitaovana tsy tenona dia masinina ampiasaina hamokarana lamba tsy tenona, koa inona no tombony azo amin'ny fampiasana fitaovana tsy tenona amin'ny famokarana? Azonao atao ny manaraka ny tonian-dahatsoratra hamaky ity fampidirana manaraka ity hamaliana ireo fisalasalanao.
1. Ny fikorianan'ny fitaovana tsy misy tenona iray manontolo dia afaka mandeha ho azy tanteraka, mitaky olona 1 ka hatramin'ny 2 hiasa, izay afaka mamonjy asa voafetra
2. Ireo fitaovana vita amin'ny lamba tsy tenona dia afaka manitsy ny hafainganan'ny famokarana sy ny haben'ny vokatra ao anatin'ny faritra. Ny fitaovana lamba tsy misy tenona dia mampiasa fiasan'ny efijery, misy karazana dingana maharitra, fanarahana ny photoelectric, fanisana mandeha ho azy ary famelezana ho azy ary fitaovana fanaraha-maso indostrialy hafa, izay mora ampiasaina.
3. Mba hahatsapana bebe kokoa ny vokatra azo avy amin'ny angovo azo avy amin'ny fitaovana tsy tenona, ny fitaovana tsy tenona dia manana ny asany amin'ny famerenana ireo fitaovana ambim-bava mandritra ny fizotry ny famokarana fitaovana tsy tenona, ary manangona ho azy ireo sisa tavela amin'ny fizotry ny famokarana. , izay manampy amin'ny fampiasana faharoa ary mampihena ny hamafin'ny asa. Fampitomboana ny fahombiazan'ny asa. Ny famerenana ireo fitaovana fako dia tsy mamonjy loharanon-karena fotsiny fa misy akony fiarovana tsara amin'ny tontolo iainana.
Raha ampitahaina amin'ny famokarana manual ny lamba tsy tenona, ny fampiasana fitaovana tsy tenona hamokarana lamba tsy voatenona dia afaka hanafainganana ny hafainganana famokarana; miaraka amin'izay, ny fitaovana tsy tenona dia tsotra hiasa ary tsy mitaky mpanamboatra mpiasa teknika fanampiny hiasa; fitaovana tsy tenona Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fampandrosoana maharitra ihany koa izy ary manaraka ny fitsipiky ny fiarovana ny tontolo iainana. Ireo no tombony azo avy amin'ny fitaovana tsy tenona ary hazavao ny antony ankafizin'ny tsena ny fitaovana tsy tenona. Betsaka ny marika fitaovana tsy tenona. Ny marika samihafa an'ny mpanamboatra fitaovana tsy tenona dia samy manana ny vokany amin'ny fampiasana fitaovana tsy tenona noho ny fahasamihafana amin'ny fizotry ny famokarana. Azonao atao ny manamarina ny traikefa amin'ny fampiasana ireo fitaovana tsy voatenona alohan'ny hividianana.